Gịnị Bụ Alaeze Chineke? - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Bambara Baoule Basque Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Costa Rican Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kabyle Kalenjin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
ISI NKE ASATỌ
Gịnị ka Bible na-agwa anyị banyere Alaeze Chineke?
Olee mgbe Alaeze ahụ ga-emezu uche Chineke n’ụwa?
ỌTỤTỤ nde mmadụ n’ụwa nile maara ekpere ahụ ọtụtụ ndị na-akpọ Nna Anyị nke Bi n’Eluigwe, ma ọ bụ Ekpere Onyenwe Anyị. Okwu abụọ ndị a na-ezo aka n’otu ekpere a ma ama nke Jizọs Kraịst n’onwe ya kụziri dị ka ihe nlereanya. Ọ bụ ekpere pụtara ihe dị ukwuu, ịtụlekwa arịrịọ atọ mbụ ndị dị na ya ga-enyere gị aka ịmatakwu ihe Bible na-akụzi n’ezie.
2 Ná mmalite nke ekpere ihe nlereanya a, Jizọs kụziiri ndị na-ege ya ntị, sị: “Ya mere, kpeenụ ekpere otú a: ‘Nna anyị nke nọ n’eluigwe, ka e doo aha gị nsọ. Ka alaeze gị bịa. Ka uche gị meekwa n’ụwa, dị ka ọ na-eme n’eluigwe.’ ” (Matiu 6:9-13) Gịnị ka arịrịọ atọ ndị ahụ pụtara?
3 Anyị amụtaworị ọtụtụ ihe banyere aha Chineke, bụ́ Jehova. Anyị atụlewokwa uche Chineke ruo n’ókè ụfọdụ—ihe o mewooro ihe a kpọrọ mmadụ na ihe ndị ọ ka ga-emere ha. Otú ọ dị, gịnị ka Jizọs na-ezo aka na ya mgbe ọ gwara anyị ka anyị na-ekpe ekpere, sị: “Ka alaeze gị bịa”? Gịnị bụ Alaeze Chineke? Olee otú ọbịbịa ya ga-esi doo aha Chineke nsọ? Oleekwa ihe jikọrọ ọbịbịa nke Alaeze ahụ na ime uche Chineke?
IHE ALAEZE CHINEKE BỤ
4 Alaeze Chineke bụ ọchịchị nke Jehova Chineke guzobere, bụ́ nke nwere Eze nke Chineke họpụtara. Ònye bụ Eze nke Alaeze Chineke? Ọ bụ Jizọs Kraịst. Dị ka Eze, Jizọs ka ndị ọchịchị nile bụ́ mmadụ ukwuu, a na-akpọkwa ya “Eze nke ndị na-achị achị dị ka ndị eze na Onyenwenụ nke ndị na-achị achị dị ka ndị nwenụ.” (1 Timoti 6:15) O nwere ikike nke ime ihe dị mma karịa onye ọchịchị ọ bụla bụ́ mmadụ, ọbụna onye nke kasị mma n’ime ha.
5 Ebee ka Alaeze Chineke ga-esi na-achị? Ọ dị mma, ebee ka Jizọs nọ? Ọ̀ kwa i chetara na e gburu ya n’elu osisi ịta ahụhụ, e mesịakwa kpọlite ya n’ọnwụ. Nwa obere oge ka nke ahụ gasịrị, ọ rịgooro n’eluigwe. (Ọrụ 2:33) N’ihi ya, ọ bụ ebe ahụ ka Alaeze Chineke dị—n’eluigwe. Ọ bụ ya mere Bible ji akpọ ya “alaeze eluigwe.” (2 Timoti 4:18) Ọ bụ ezie na Alaeze Chineke dị n’eluigwe, ọ ga na-achị ụwa.—Mkpughe 11:15.
6 Gịnị mere Jizọs ji bụrụ Eze pụrụ iche? Otu ihe mere o ji bụrụ Eze pụrụ iche bụ na ọ gaghị anwụ anwụ. N’iji Jizọs tụnyere ndị eze bụ́ mmadụ, Bible na-akpọ ya “onye nanị ya nwere anwụghị anwụ, onye bi n’ìhè a na-apụghị iru nso.” (1 Timoti 6:16) Nke ahụ pụtara na ihe ọma nile Jizọs na-eme ga-adịgide adịgide. Ọ ga-emekwa ọtụtụ ihe ọma.
7 Tụlee amụma a Bible buru banyere Jizọs: “Mmụọ nke Jehova ga-enwekwa ọnọdụ Ya n’ahụ́ ya, bụ́ Mmụọ nke amamihe na nghọta, Mmụọ nke ndụmọdụ na ịdị ike, Mmụọ nke ihe ọmụma na egwu Jehova; ọzọ, ihe na-atọ ya ụtọ bụ egwu Jehova: ọ bụghịkwa dị ka anya ya abụọ si ahụ ka ọ ga-ekpe ikpe, ọ bụghịkwa dị ka ntị ya abụọ si anụ ka ọ ga-aba mba: kama ọ ga-eji ezi omume kpee ndị na-enweghị ike ikpe, ọ ga-ejikwa izi ezi baa mba banyere ndị dị umeala n’obi n’ụwa.” (Aịsaịa 11:2-4) Nke a na-egosi na Jizọs gaje ịbụ Eze ezi omume nke nwere ọmịiko, bụ́ onye ga-achị ndị nọ n’ụwa. Ị̀ ga-achọ inwe onye ọchịchị dị otú ahụ?
8 Ọ dị ihe ọzọ bụ́ eziokwu banyere Alaeze Chineke: Jizọs agaghị achị nanị ya. Ọ dị ndị ha na ya ga-achị. Dị ka ihe atụ, Pọl onyeozi gwara Timoti, sị: “Ọ bụrụ na anyị anọgide na-atachi obi, anyị ga-achịkọkwa achị dị ka ndị eze.” (2 Timoti 2:12) Ee, Pọl, Timoti, na ndị ọzọ kwesịrị ntụkwasị obi, bụ́ ndị Chineke họpụtara, ga-eso Jizọs chịa n’Alaeze eluigwe. Mmadụ ole ga-enwe ihe ùgwù ahụ?
9 Dị ka a kọwara n’Isi nke 7 nke akwụkwọ a, n’ọhụụ, Jọn onyeozi hụrụ “nwa Atụrụ ahụ [Jizọs Kraịst] ka ọ na-eguzo n’elu Ugwu Zaịọn [ọnọdụ ya dị ka eze n’eluigwe], ya na narị puku na iri puku anọ na anọ, bụ́ ndị e dekwasịrị aha ya na aha Nna ya n’egedege ihu ha.” Ole ndị bụ 144,000 ahụ? Jọn n’onwe ya na-agwa anyị, sị: “Ndị a bụ ndị nọgidere na-eso Nwa Atụrụ ahụ n’agbanyeghị ebe ọ na-eje. E si n’etiti ihe a kpọrọ mmadụ zụta ndị a dị ka mkpụrụ mbụ nye Chineke nakwa nye Nwa Atụrụ ahụ.” (Mkpughe 14:1, 4) Ee, ha bụ ụmụazụ kwesịrị ntụkwasị obi nke Jizọs Kraịst, bụ́ ndị a họpụtara n’ụzọ pụrụ iche iso ya chịa n’eluigwe. Mgbe a kpọlitesịrị ha n’ọnwụ gaa ná ndụ eluigwe, ha ga-esoro Jizọs ‘chịa ụwa dị ka ndị eze.’ (Mkpughe 5:10) Kemgbe oge ndịozi, Chineke anọwo na-ahọpụta Ndị Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi iji mee ka ọnụ ọgụgụ ahụ zuo 144,000.
10 Ime ndokwa ka Jizọs na 144,000 chịa ihe a kpọrọ mmadụ bụ ihe na-egosipụta nnọọ ịhụnanya. Otu ihe mere o ji dị otú ahụ bụ na Jizọs abụtụwo mmadụ, taakwa ahụhụ. Pọl kwuru na Jizọs ‘abụghị onye na-apụghị imetara anyị ebere n’adịghị ike anyị, kama ọ bụ onye a nwaleworo n’ụzọ nile dị ka anyị onwe anyị, ma o nweghị mmehie.’ (Ndị Hibru 4:15; 5:8) Ndị ha na ya ga-eso achị atawokwa ahụhụ ma tachie obi n’oge ha bụ mmadụ. Tụkwasị na nke ahụ, ha alụsowokwa ezughị okè ọgụ ma nagide ụdị ọrịa dị iche iche. N’ezie, ha ga-aghọta nsogbu ndị ụmụ mmadụ na-eche ihu!
11 Mgbe Jizọs kwuru na ndị na-eso ụzọ ya kwesịrị ikpe ekpere ka Alaeze Chineke bịa, o kwukwara na ha kwesịrị ikpe ekpere ‘ka e mee uche Chineke n’ụwa, dị ka a na-eme n’eluigwe.’ Chineke nọ n’eluigwe, ndị mmụọ ozi kwesịrị ntụkwasị obi anọwokwa na-eme uche ya n’ebe ahụ. Otú ọ dị, n’Isi nke 3 nke akwụkwọ a, anyị mụtara na otu ajọ mmụọ ozi kwụsịrị ime uche Chineke ma mee ka Adam na Iv mehie. N’Isi nke 10, anyị ga-amụkwu ihe Bible na-akụzi banyere ajọ mmụọ ozi ahụ, bụ́ onye anyị maara dị ka Setan bụ́ Ekwensu. A hapụrụ Setan na ndị mmụọ ozi e kere eke bụ́ ndị kpebiri iso ya—ndị a na-akpọ ndị mmụọ ọjọọ—ka ha nọtụ n’eluigwe. N’ihi ya, ọ bụghị ndị nile nọ n’eluigwe mgbe ahụ na-eme uche Chineke. Nke ahụ gbanwere mgbe Alaeze Chineke malitere ịchị. Onye ahụ e chiri eze ọhụrụ, bụ́ Jizọs Kraịst, busoro Setan agha.—Mkpughe 12:7-9.
12 Okwu amụma ndị na-esonụ na-akọwa ihe merenụ: “M wee nụ oké olu n’eluigwe ka ọ na-asị: ‘Nzọpụta na ike na alaeze nke Chineke anyị na ikike nke Kraịst ya aghọwo ihe weere ọnọdụ ugbu a, n’ihi na a chụdawo onye ahụ nke na-ebo ụmụnna anyị ebubo [Setan], bụ́ onye na-ebo ha ebubo ehihie na abalị n’ihu Chineke anyị!’ ” (Mkpughe 12:10) Ị̀ hụrụ ihe abụọ ndị dị nnọọ mkpa a kọwara n’amaokwu Bible ahụ? Nke mbụ, Alaeze Chineke nke dị n’aka Jizọs Kraịst malitere ịchị. Nke abụọ, e si n’eluigwe chụdata Setan n’ụwa.
13 Gịnị siworo n’ihe abụọ ndị ahụ merenụ pụta? Banyere ihe mere n’eluigwe, anyị na-agụ, sị: “N’ihi nke a na-aṅụrịnụ ọṅụ, unu eluigwe nile na unu ndị bi n’ime ha!” Ee, ndị mmụọ ozi kwesịrị ntụkwasị obi, bụ́ ndị nọ n’eluigwe, na-aṅụrị ọnụ n’ihi na, ebe ọ bụ na Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya anọghịzi ebe ahụ, ndị nile nọ n’eluigwe na-ekwesị ntụkwasị obi nye Jehova Chineke. N’ebe ahụ, e nwere udo na ịdị n’otu zuru ezu, nke na-adịgide adịgide. A na-emezi uche Chineke n’eluigwe.
14 Otú ọ dị, gịnị banyere ụwa? Bible na-ekwu, sị: “Ahụhụ ga-adịrị ụwa, dịkwara oké osimiri, n’ihi na Ekwensu arịdakwuruwo unu, na-ewe oké iwe, ebe ọ maara na o nwere oge dị mkpirikpi.” (Mkpughe 12:12) Iwe ji Setan n’ihi nchụpụ a chụpụrụ ya n’eluigwe nakwa n’ihi oge dị mkpirikpi o nwere. N’iwe, ọ na-akpata nhụjuanya, ma ọ bụ “ahụhụ,” n’ụwa. Anyị ga-amụkwu banyere “ahụhụ” ahụ n’isiakwụkwọ na-esonụ. Ma, n’ihi ọnọdụ a e nwere, anyị pụrụ ịjụ, sị, Olee otú Alaeze ahụ ga-esi mezuo uche Chineke n’ụwa?
15 Ọ dị mma, cheta ihe bụ́ nzube Chineke maka ụwa. Ị gụrụ ya n’Isi nke 3 n’akwụkwọ a. N’Iden, Chineke gosiri na nzube ya bụ ka ụwa a bụrụ paradaịs nke agbụrụ ụmụ mmadụ bụ́ ndị ezi omume, ndị na-agaghị anwụ anwụ, jupụtara. Setan mere ka Adam na Iv mehie, nke ahụ mere ka nzube Chineke maka ụwa ghara imezu ozugbo ma o meghị ka ọ gbanwee. Nzube Jehova ka bụ na “ndị ezi omume ga-enweta ala, birikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi.” (Abụ Ọma 37:29) Alaeze Chineke ga-emezu nke ahụ. Ọ̀ bụ n’ụzọ dị aṅaa?
Nchụpụ a chụpụrụ Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya n’eluigwe kpatara ahụhụ n’ụwa Nsogbu ndị dị otú ahụ ga-akwụsị n’oge na-adịghị anya
16 Tụlee amụma dị na Daniel 2:44. N’ebe ahụ, anyị na-agụ, sị: “N’ụbọchị ha, bụ́ eze ndị a, ka Chineke nke eluigwe ga-eme ka otu alaeze bilie, nke a gaghị emebi emebi ruo mgbe ebighị ebi, ọ bụkwa ọbụbụeze ya ka a na-agaghị ahapụrụ ndị ọzọ; ọ ga-etipịa alaeze ndị a nile mee ka ha gwụsịa, ma ya onwe ya ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.” Gịnị ka nke a na-agwa anyị banyere Alaeze Chineke?
17 Nke mbụ, ọ na-agwa anyị na a gaje iguzobe Alaeze Chineke “n’ụbọchị ha, bụ́ eze ndị a,” ma ọ bụ mgbe alaeze ndị ọzọ ka na-achị. Nke abụọ, ọ na-agwa anyị na Alaeze ahụ ga-adịru mgbe ebighị ebi. Ọ dịghị ọchịchị ọzọ ga-emeri ma ọ bụ nọchie ya. Nke atọ, anyị hụrụ na Alaeze Chineke na alaeze ndị dị n’ụwa a ga-alụ agha. Alaeze Chineke ga-emeri ha. N’ikpeazụ, ọ ga-abụ nanị ọchịchị ga-achị ihe a kpọrọ mmadụ. Mgbe ahụ, ndị mmadụ ga-anụ ụtọ ọchịchị kasị mma.
18 Bible nwere ọtụtụ ihe ikwu banyere agha ikpeazụ ahụ Alaeze Chineke na ọchịchị dị iche iche nke ụwa a ga-alụ. Dị ka ihe atụ, ọ na-akụzi na ka ọgwụgwụ na-eru nso, ndị ajọ mmụọ ga-agbasa ụgha iji duhie “ndị eze nke elu ụwa dum mmadụ bi.” Maka nzube dị aṅaa? “Ịchịkọta ha [ndị eze ahụ] ọnụ gaa n’agha nke oké ụbọchị nke Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Nile.” A ga-achịkọta ndị eze nke elu ụwa a ọnụ “n’ebe a na-akpọ Ha-Magedọn n’asụsụ Hibru.” (Mkpughe 16:14, 16) N’ihi ihe e kwuru n’amaokwu abụọ ndị ahụ, a na-akpọ agha ikpeazụ ọchịchị ụmụ mmadụ na Alaeze Chineke ga-alụ agha Ha-Magedọn, ma ọ bụ Amagedọn.
19 Gịnị ka Alaeze Chineke ga-arụzu site n’Amagedọn? Cheedị ọzọ ihe bụ́ nzube Chineke maka ụwa. Jehova Chineke zubere ka agbụrụ ụmụ mmadụ zuru okè, bụ́ ndị ezi omume, ndị na-ejere ya ozi na Paradaịs, jupụta ụwa. Gịnị mere na nke ahụ emezubeghị ugbu a? Nke mbụ, anyị na-eme mmehie, na-ada ọrịa, na-anwụkwa anwụ. Otú ọ dị, anyị mụrụ n’Isi nke 5 n’akwụkwọ a na Jizọs nwụrụ n’ihi anyị ka anyị wee dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ma eleghị anya, ị na-echeta ihe e dere n’Oziọma Jọn: “Chineke hụrụ ụwa n’anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ nanị ya, ka e wee ghara ibibi onye ọ bụla nke na-egosipụta okwukwe na ya, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.”—Jọn 3:16.
20 Nsogbu ọzọ e nwere bụ na ọtụtụ ndị na-eme ihe ọjọọ. Ha na-agha ụgha, na-egwu wayo, na-emekwa omume rụrụ arụ. Ha achọghị ime uche Chineke. A ga-ebibi ndị na-eme ihe ọjọọ n’agha Chineke bụ́ Amagedọn. (Abụ Ọma 37:10) Ihe ọzọkwa mere na a dịghị eme uche Chineke n’ụwa bụ na gọọmentị dị iche iche adịghị akpali ndị mmadụ ime ya. Ọtụtụ gọọmentị abụwo ndị na-adịghị ike, ndị na-emekpọ ndị mmadụ ọnụ, ma ọ bụ ndị na-adịghị akwụwa aka ọtọ. Bible na-ekwu, hoo haa, sị: “Mmadụ nwere ike n’ahụ́ mmadụ ibe ya imejọ ya.”—Eklisiastis 8:9.
21 Amagedọn gasịa, ihe a kpọrọ mmadụ ga-anọ n’okpuru nanị otu ọchịchị, Alaeze Chineke. Alaeze ahụ ga-emezu uche Chineke, ọ ga-ewetakwa ngọzi ndị magburu onwe ha. Dị ka ihe atụ, ọ ga-ewepụ Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya. (Mkpughe 20:1-3) A ga-eji uru nke àjà Jizọs mee ihe iji mee ka ụmụ mmadụ na-ekwesị ntụkwasị obi gharazie ịdị na-arịa ọrịa na ịdị na-anwụ anwụ. Kama nke ahụ, n’okpuru ọchịchị Alaeze ahụ, ha ga-enwe ike ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. (Mkpughe 22:1-3) A ga-eme ka ụwa ghọọ paradaịs. N’ihi ya, Alaeze ahụ ga-emezu uche Chineke n’ụwa, ọ ga-edokwa aha Chineke nsọ. Gịnị ka nke a pụtara? Ọ pụtara na n’ikpeazụ, mgbe Alaeze Chineke bịara, onye ọ bụla nọ ndụ ga-eto aha Jehova.
OLEE MGBE ALAEZE CHINEKE GA-EME IHE?
22 Mgbe Jizọs gwara ụmụazụ ya ka ha kpee ekpere, sị, “Ka alaeze gị bịa,” o doro anya na Alaeze ahụ abịabeghị mgbe ahụ. Ọ̀ bịara mgbe Jizọs rịgooro n’eluigwe? Ee e, n’ihi na ma Pita ma Pọl kwuchara na mgbe a kpọlitesịrị Jizọs n’ọnwụ, amụma ahụ dị n’Abụ Ọma 110:1 mezuru n’ebe ọ nọ: “Ihe nke si n’ọnụ Jehova pụta na-asị onyenwe m, Nọdụ ala n’aka nri m, ruo mgbe M ga-edo ndị iro gị ka ihe mgbakwasị dịrị ụkwụ gị abụọ.” (Ọrụ 2:32-34; Ndị Hibru 10:12, 13) E nwere oge nchere.
N’okpuru ọchịchị Alaeze ahụ, a ga-eme uche Chineke n’ụwa dịkwa ka n’eluigwe
23 Ọ̀ hà aṅaa n’ogologo? Na narị afọ nke 19, ndị ji ezi obi na-amụ Bible gụkọtara oge ma kwubie na oge nchere ahụ ga-ejedebe n’afọ 1914. (Banyere afọ a, lee Ihe Odide Ntụkwasị.) Ihe ndị malitere ime n’ụwa n’afọ 1914 gosiri na ngụkọta oge nke ndị ahụ ji ezi obi na-amụ Bible mere ziri ezi. Mmezu nke amụma Bible na-egosi na n’afọ 1914, Kraịst ghọrọ Eze, Alaeze eluigwe nke Chineke malitekwara ịchị. N’ihi ya, anyị na-ebi n’oge ahụ “dị mkpirikpi” nke fọdụụrụ Setan. (Mkpughe 12:12; Abụ Ọma 110:2) Anyị pụkwara ikwu hoo haa na n’oge na-adịghị anya, Alaeze Chineke ga-eme ihe iji mezuo uche Chineke n’ụwa. Ị̀ hụrụ nke a dị ka akụkọ dị mma? Ì kwere na nke ahụ bụ eziokwu? Isiakwụkwọ na-esonụ ga-enyere gị aka ịhụ na Bible na-akụzi ihe ndị a n’ezie.
Alaeze Chineke bụ ọchịchị eluigwe nke Jizọs Kraịst ga-achị na ya dị ka Eze, e sikwa n’etiti ihe a kpọrọ mmadụ họta 144,000 iso ya chịa.—Mkpughe 14:1, 4.
Alaeze ahụ malitere ịchị na 1914, ọ bụkwa mgbe ahụ ka e si n’eluigwe chụdata Setan n’ụwa.—Mkpughe 12:9.
N’oge na-adịghị anya Alaeze Chineke ga-ebibi ọchịchị ụmụ mmadụ, ụwa ga-aghọkwa paradaịs.—Mkpughe 16:14, 16.
1. Ekpere dị aṅaa, nke a ma ama, ka a ga-atụle ugbu a?
2. Gịnị bụ atọ n’ime ihe ndị Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ikpe ekpere maka ha?
3. Olee ihe ọ dị mkpa ka anyị mata banyere Alaeze Chineke?
4. Gịnị bụ Alaeze Chineke, ònyekwa bụ Eze ya?
5. Ebee ka Alaeze Chineke ga-esi na-achị, ebeekwa ka ọ ga na-achị?
6, 7. Gịnị mere Jizọs ji bụrụ Eze pụrụ iche?
8. Ole ndị ga-eso Jizọs chịa?
9. Mmadụ ole ga-eso Jizọs chịa, oleekwa mgbe Chineke malitere ịhọpụta ha?
10. N’ihi gịnị ka ime ndokwa ka Jizọs na 144,000 chịa ihe a kpọrọ mmadụ ji bụrụ ndokwa ịhụnanya?
11. Gịnị ka Jizọs kwuru na ndị na-eso ụzọ ya kwesịrị ikpe ekpere maka ya n’ihe banyere uche Chineke?
12. Ihe abụọ ndị dị aṅaa, dị mkpa, ka a kọwara ná Mkpughe 12:10?
13. Gịnị siworo ná nchụpụ a chụpụrụ Setan n’eluigwe pụta?
14. Gịnị ka nchụda a chụdatara Setan n’ụwa na-akpata?
15. Gịnị bụ nzube Chineke maka ụwa?
16, 17. Gịnị ka Daniel 2:44 na-agwa anyị banyere Alaeze Chineke?
18. Gịnị ka a na-akpọ agha ikpeazụ ahụ Alaeze Chineke na ọchịchị nke ụwa a ga-alụ?
19, 20. Gịnị mere na a dịghị eme uche Chineke n’ụwa ugbu a?
21. Olee otú Alaeze ahụ ga-esi mezuo uche Chineke n’ụwa?
22. Olee otú anyị si mara na Alaeze Chineke abịaghị mgbe Jizọs nọ n’ụwa ma ọ bụ ozugbo a kpọlitesịrị ya n’ọnwụ?
23. (a) Olee mgbe Alaeze Chineke malitere ịchị? (b) Gịnị ka a ga-atụle n’isiakwụkwọ na-esonụ?